Date My Pet » Ahoana no ahafantaranao Ianao amin'ny fitiavana?
Ahoana no ahafantaranao Ianao amin'ny fitiavana?
Last nohavaozina: Sep. 23 2020 | 3 min namaky
Tsaroako ny fotoana voalohany raiki-pitia. Ary mino aho fa azo inoana ny fahamarinana dia fantatrao izany ao am-ponao avy hatrany. Fantatrao ny maha samy hafa ny rehetra hanorotoro sy ny fihetseham-po mahery nanananao ho an'ny olona sy ny fomba tsapanao momba izany ny olona iray. Amin'ny filazana fa, ny fomba nahafantaranao raha tsorina antony vitsivitsy izay efa voatanisa etsy ambany.
Rehefa tia olona iray ianao, ianao any am-marefo indrindra. Te hampifaly azy ireo, hahatonga azy ireo, hahatonga azy ireo ho faly. Lazao izy ireo intsony ny kitapom-batsy ho ohatra ianao no voalohany mitady izany. Ary tsy toy izany ny 'Oh, fa mahantra ny olona namoy ny kitapom-batsy.’ Tena lalina kokoa mihoatra noho izay. Tsy afaka ny hitondra misy zavatra ratsy manjo azy ireo. Tsara koa izy ireo ny olona ho ratsy na inona na inona hitranga ho azy ireo. Tsy mendrika na inona na inona ratsy ny hanjo azy ireo. Efa misokatra anareo ho amin'ny fihetseham-po izay tsy misy nieritreritra ary mahafinaritra kokoa noho ianao ve afaka an-tsaina. Manomboka ny fidirana any amin'ilay hira tiany. Tsy fantatrao ianao, Mety ho izany fotsiny ny manomboka ny resaka. Ary raha izany unrequited, fa marina izany. Ny fifaliana azonao avy amin'ny fomba tsapanao momba azy ireo overrides misy ny ratram- (na akaiky adala!) fa mahatsapa ianao satria tsy afaka ny hanana azy ireo. Raha tsorina dia efa mora izany ary very amin'ny zava-drehetra momba azy ireo no mety ho tena fomba dia fantatray, ary satria fantatrareo fa ianareo dia hanome ny nofy rehetra mba hiaraka amin'izy ireo. Mino aho fa izany angamba ny fantatro, satria tena fatra-paniry laza aho sy ny zavatra farany tiako dia ny ho voafatotra tanora fa raha izy no tiako naniry ahy ary te-hanorim-ponenana teo Fantatro tamin 'ny fotoana aho efa ho azy izay fantatro aho, dia tsy atao ho an'ny olona rehetra.
Miresaka momba azy ireo tsy tapaka
Izany dia sarotra iray, satria izay tena anananareo izany ny olona izay manana hanorotoro eo koa fa mba ho teo amin'ny lafin-javatra ao amin'ny fitiavana koa. Fotsiny izany fa ny ao amin'ny anton-javatra hafa ankoatra ny ao amin'ny lisitra io rehefa amim-pitiavana ianao raha oharina amin'ny efa infatuated. Tsaroako aho miresaka be ny anabaviko momba ny bandy aho-pitia. Tsy hilaza aminy fa fantany. Niaiky izy nanao taona izy rehefa tsy afaka satria nanidy-maso momba ny tena izy, ny mampihomehy izy, tena tsara fanahy izy, ny fomba ahitana Te ahy, ny saro-kenatra iray, amin'ny resaka.
Efa Nandritra Sambatra By Azy ianao hampisehoana Fitandremana
Eny, dia afaka mahazo faly amin'ny olona iray tena mihaja mampiseho endriky ny sain'ny rehetra fa ny tia olona izany mihoatra noho izany. Dia mahatsapa ny kely toy ny fifandraisana. Eo amin'ny fiainany izy ireo niresaka taminao! Izay toa somary mampalahelo fa ara-dalàna raha tia olona iray ianao, satria hitanao azy ireo ho lavorary izay tsy ny tenanao ho tonga lafatra. Ary rehefa manonona ny anaranao tsinona ny feony toy ny hira fiderana. Toy ny zavatra tena tsara indrindra ianao nandre. Ka lazaiko fifandraisana dia mety ho azo atao fa raha tia fifandraisana izany unrequited, dia afaka ny ho mpinamana fifandraisana. Izao zavatra izao, raha tsy tia anao indray fa tianao izy ireo mbola te azy ireo eo amin'ny fiainanao amin'ny sasany fahaiza-ary izany misokatra ny miady hevitra na mety ho salama zava-misy eo amin'izao tontolo izao fa tena fomba ny olombelona ny fihetseham-po am milalao asa.
Misy lalina Maniry mafy ho tamin'ny antokony, ary rehefa mieritreritra mety tsy hahita azy ireo indray misy foana izany fihetseham-po ao anatiny. Izany torturous tena. Koa raha manan-teny kely aminao zava-pisotro, dia mahazo ratsy. Manomboka mitomany. Ary mety tsy hahatsapa toy izany nandritra ny nahataratara. Foana izany fihetseham-po iray tsy manana azy ireo ny eo amin'ny fiainanao, ary hahatsapa ho toy ny fiainanareo miara-mandeha tsy ho tanteraka raha tsy misy azy ireo. Toy izany ny antsasaky ny fiainana. Zavatra rehetra dia tsy hahazo zava-dehibe. Fa ianareo hivoahana eo. Tena ela lalana fa tonga ianao ny lafiny hafa.
Afaka Food Ataovy Tsara fifandraisana rehetra Mpianatra?
15 Kaonty Twitter Best hanaraka ny torohevitra ao Dating 2015
Nahoana Isika no Tokony tsy Andramo To Manova ny Guy
Top 10 Fahadisoana Men Ataovy Rehefa nifandray Women Online
Top US Cities mba ho Single